Dzose free download, or read Dzose online
runovimba nguva dzose, rune tariro nguva dzose, runotsungirira nguva dzose …. Rudo harungaperi” (1 Vakorinte 13:7 ‐8) Saka chii chinoitika kana tichinamata tichishandisa zvombo zvatakapiwa naMwari? 2 Vakorinte
nguva, vakorinte, tichishandisa, zvombo, zvatakapiwa
AUNTIE STELLA QUESTION CARDS - (SHONA VERSION)
kukudza vakuru vavo nguva dzose,kunyange vakuru vacho vakavati vaite zvinhu zvine ngozi kana zvinokuvadza? • Ndeapi mazano aungapa Patricia?
vakuru, zvinokuvadza, ngozi, ndeapi, aungapa
How can you help yourself if you are being abused?
Kugaroshoropodza mwana nguva dzose. Kupomera kana kunenedzera mwana mhosva nekumutyisidzira. Kusabata vana zvakaenzana. Kubhinya vana. Kurova mwana zvisina mwero.?
mwana, kubhinya, zvakaenzana, kurova, zvisina
HIV ne AIDS Chokwadi kana Manyepo?
Zvirwere zvepabonde zvine zviratidzo nguva dzose. Utunga nezvimwe zvinoruma zvinoparadzira hutachiwana hweHIV. Hazvina kana basa kushandisha makondomu
hutachiwana, zvinoparadzira, hwehiv, hazvina, makondomu
AUNTIE STELLA ANSWER CARDS
Makatarisa zvose zvamava kuziva, dai waiva Leroy, waitaurira mudiwa wako kana kuti vadiwa vako kuti une njovhera here? • BASA ROKUITA: Gadzira chionwa chinotaridza nzvimbo ( map ) dzose dzaunoziva kunogona kutorwa makondomu nevechidiki munzvimbo menyu.
dzaunoziva, nzvimbo, chinotaridza, chionwa, kunogona
SHONA BIBLE TRANSLATION
Farai imi kana muchitukwa noku-Happy are you when people abuse shushwa nokureverwa nhema dziri you and persecute you and speak dzose pamusana pangu.
persecute, dziri, speak, pamusana, pangu
J3059 - Shona passport
Kana uine utachiona hwe HIV kana kuti hauna, shandisa ma condom nguva dzose. Izvi zvinokudzivirira kubva muzvirwere zvepabonde, kusanganisa HIV pamwechete nekubata pamuviri usati wagadzirira.
pamwechete, kusanganisa, nekubata, pamuviri, wagadzirira
ZVINOTUNGAMIRIRA MUKUSARUDZA ZVIDO
chandakamboona chinogona kushandisika nevanhu vemhando dzose (kusanganisira nevarume), chichitarisawo kusiyana-siyana kwezvavanoda uyewo nepavari.
siyana, kusiyana, kwezvavanoda, uyewo, nepavari
Mabasa ezvehutano muUK / Health Services in the UK Zviri ...
Chiremba havakupei tsamba yemishonga nguva dzose; vamwe vanoti munozvitengera mimwe mishonga kuchitoro chemishonga. Ndinofanira kuripa here kana ndine tsamba yekuwana mishonga?
mishonga, tsamba, chemishonga, kuchitoro, ndinofanira
Kudanana kune ungwaru Gwaro revakadzi
Zviitei nguva dzose: Kana matanga rambai muchizviita nguva dzose. Yeukai kuti makondomu anodzivirira kubata pamuviri pausisangadi nekudzivirira neutachiwana hweHIV kana akashandiswa nemazvo nguva dzose. 10
nguva, nekudzivirira, pausisangadi, neutachiwana, akashandiswa